Weather in Bali in Oktobra ~ Journey-Assist - Fety tany Bali amin'ny volana oktobra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali tamin'ny Oktobra
Andro any Bali tamin'ny Oktobra
Ny volana Oktobra dia iray volana mampanantena mba miala voly, fa amin'ny faran'ny Oktobra dia miova ny toe-javatra. Oktobra dia volana mampifandray ny vanin-taona maina miaraka amin'ny fotoanan'ny orana any Bali. Amin'ity volana ity, ny masoandro mafana sy ny hafanana no manjaka, ny mari-pana dia +32, tsy misy zavatra simba, fa ny toetran'ny hafanana amin'ny fotoanan'ny orana dia efa tsapa. Amin'ny andro farany amin'ny volana oktobra, mafana be ny masoandro. Ao ny orana fohy. Mafana ny rano amin'ny ranomasina. Fotoana mety hiserana io.
Tamin'ny volana Oktobra, ny hafanana efa akaiky dia efa mahatsapa miaraka amin'ny vanim-potoana ambany any Bali. Amin'ny fiandohan'ny volana, ny mari-pana dia 31 ° C, ary eo amin'ny tapany faharoa dia mahatratra 32-33 ° C.
Ny mari-pana amin'ny alina dia mihena amin'ny 23 ° C amin'ny fiandohan'ny volana ary amin'ny 24 ° C amin'ny antsasany faharoa.
Ny rano ao amin'ny ranomasina dia mijanona hatramin'ny fahavaratra 27 ° C. Ny fialan-tsasatra amin'ny tora-pasika dia mbola azo ekena amin'ity volana ity.
Ny hamandoana Oktobra
Ny fanetrentena tamin'ny volana Oktobra dia niakatra ary nahatratra 75%. Ny fitomboan'ny mari-pana sy ny hamandoana avo dia mifameno mandritra ny fijanonana ela velona amin'ny rivotra misokatra. Mihabetsaka ny lanitra rakotry ny rahona. Mandritra ny maraina dia mitombo ny zavona sy matevina, indrindra any amin'ireo faritra be tendrombohitra.
Varatra any Bali ny volana Oktobra
Tsy dia mahalana loatra ny fanafoanana ny volana Oktobra. Matetika dia vetivety ihany izy ireo ary mandalo amin'ny alina, fa misy kosa ny ekipa. Amin'ny andro iray, 12 andro be rahona, manohitra ny 18 masoandro.
Surfing ao Bali tamin'ny volana septambra
Tamin'ny Oktobra, dia nitaingin-tsoavaly ireo mpandeha an-tsoavaly. Ireo toeram-pianarana Surf sy ny sekolin-dranomasina dia mbola miasa. Mbola tsy tena faran'izay bitika ny ranomasina, ary amin'ny ankapobeny, amin'ity volana ity dia ankasitrahana amin'ny fisarahana.